Robolinux 10.6 inosvika ichigadzirira kupera kweWindows 7 rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vashandisi veLinux vanoziva kuti isu tinokwanisa kumhanyisa akawanda maWindows application tisingashandisi yechinyakare Microsoft inoshanda sisitimu. Tinoziva waini, PlayOnLinux, Virtualbox… Asi hatisi tese tine ruzivo rwakaenzana. Nechikonzero ichocho pane zvakagoverwa senge ichangobva kuburitsa vhezheni itsva. Kugoverwa uku kune zita re robot uye vhezheni yaakatangisa ndeye Robolinux 10.6.
Sezvatinotsanangura muchinyorwa chedu RoboLinux: iyo distro iyo inogona kumhanyisa software yeWindows, Robolinux kugoverwa kweLinux kune vashandisi vasina ruzivo kubva kwatinogona kugadzira Microsoft system chaiyo michina nekuita mashoma mashoma. Uye zvakare, ine software yakaiswa nekusarudzika iyo inotibatsira kumhanya maWindows mafaera, asi haisi iyo yakanyanya kunaka sarudzo kune vane ruzivo vashandisi vanoziva maitiro ekuita izvi zvese zvakasiyana uye pachedu.
Chii chitsva muRobolinux 10.6
Screen yekugovana icha kupihwa kutsigira vashandisi vatsva.
Dzese shanduro dzine itsva kernel vhezheni, iyo inovandudza rutsigiro uye chengetedzo.
Mikana yekuisa iyo Brave browser kubva kune avo vanoisa, iyo yakabatana ne:
Invisible Internet Project (I2P).
Zvakajairika kuita kwekuvandudza.
Pamusoro pezvo, kugadzirira iyi nhamba hombe yevashandisi veLinux, takave nechokwadi chedu shanu gumi Series dzakaburitswa - Cinnamon, Mate 10D, Xfce, LXDE, uye Gnome - dzakasimba sezvinobvira nemeso matsva, madhiraivhadhi, uye zvinopfuura mazana mashanu ezvokuchengetedza + zvinyorwa zvekushandisa. VirtualBox yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.2.34 uye isu takawedzera yakavanzika Shinga bhurawuza kune edu emahara maisoft app.
Robolinux 10.6 inowanikwa kubva Iyi link muCinnamon, MATE 3D, LXDE, XFCE uye GNOME shanduro. Vashandisi varipo vanogona kuisa iyo nyowani vhezheni kubva kunovandudza chishandiso chinowanikwa kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Robolinux 10.6 inosvika ichigadzirira kupera kweWindows 7 rutsigiro
Miguel Angel Mora akadaro
Akanaka mukomana kuyedza ,,, asi pachokwadi kubva kune ruzivo rwunoita kunge rwakanakisa rwekushandisa system uye zvakakodzera kuti uzive uye uve naro sehurongwa pane yangu pc ,,,, !!
Pindura Miguel Angel Mora